Soo iibso Tadalafil budada Soo saaraha & warshadda
Rating: SKU: 171596-29-5. Category: Galmada Horumarinta Deedaha
AASRAW waxay leedahay awood ay ku soo saarto budada Tadalafil, 1800kg bishiiba.
Video Tadalafil budada
Jilayaasha aasaasiga ah
Name: Tadalafil (Cialis) budada
Formula kelli: C22H19N3O4
Miisaankani waa: 389.4
Dhibcaha Biyaha: 298-300 ° C
Kaydinta Nabadgelyada: 20ºC
Waa maxay budada Tadalafil
Budada Tadalafil, maaddada ceyriinka ee tadalafil, waa nooc ka mid ah budada cad, badanaa waxaa loo isticmaali jiray in lagu sameeyo kaniiniyada tadalafil. Daawada Tadalafil, aslo loo yaqaan / Cialis, waa mid ka mid ah noocyada daroogada ee loo yaqaan 'PDE-5 (Phosphodiesterase type 5) inhibitors. Kordhinta galmada Tadalafil / Cialis waxay dabcisaa muruqyada marinnada dhiigga waxayna kordhisaa socodka dhiigga ee meelaha gaarka ah ee jirka. Tadalafil / Cialis iyo kuwa kale ee kahortaga ee PDE-5 waxay ka caawin karaan ragga qaba cillad aan caadi ahayn (ED) adoo xoojinaya jawaabta kacsiga marka ninku galmada ku kaco. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cillad aan caadi ahayn (kacsi la'aan) iyo astaamaha qanjirka 'prostate hypertrophy' (qanjirka 'prostate'). Dadku badanaa waxay ka iibsadaan budada tadalafil nadiifiyaha sare ee iibiyaha budada tadalafil. Marka laga reebo Tadalafil / Cialis, daawooyinka kale ee fasalkan waa Viagra (Sildenafil) iyo Levitra (Vardenafil), iyo Flibanserin.
Sidee buu u shaqeeyaa budada tadalafil
PDE5 waa enzyme laga helo ragga badankood ee qaba xanuunka erectile. Waxay baddashaa walax kale oo muhiim ah - cGMP, ama guanosine monophosphate cycle, taas oo ah qayb muhiim ah oo geedi socodka nabarka koritaanka. Thanks to cGMP calaamadaha ka soo baxa dareen-celinta ee ku yaala gobolkaaga miskaha ayaa kiciya sii-daynta qandhada nitric oxide, taas oo markaa, ka dibna ka nasahdo muruqyada siman ee xididdada dhiigga ku jira lafahaaga. Natiijada, dhiig badan ayaa ku duuli kara, iyaga oo buuxinaya dhismayaasha qallafsan ee jidhka guskaaga, taas oo noqonaysa mid adag oo adag. Marka uu jiro PDE5 badan oo aan ku filneyn cGMP, jirkaagu si fudud uma geli karo calaamadaha ka soo baxa dareenkaaga, taas oo keenta in dhameystirto ama qayb ahaan aan awood u lahayn helitaanka kacsiga.
Markaad qaadanayso 36 saacaddii Cialis / tadalafil, waxay hoos u dhigeysaa saameynta PDE5 ee nidaamkaaga si deg deg ah, taasoo ka dhigaysa in xoogga la saaro cGMP heerarka caadiga ah sida ugu gaaban 15-45. Si kastaba ha ahaatee, nolosha Tadalafil waa mid gaaban, saameynteeda waxay gashaa xilliga maalmaha 2 ee sameynta PDE5 soo laabashada iyo caafimaadka galmadaaga - ka sii daraa. Taas beddelkeeda, markaad qaadaneyso budada Cialis / tadalafil maalin kasta, waxaay kaa caawineysaa inaad sii wado heerarka caafimaadka leh ee cGMP-ga ee jirkaaga, adigoo ku siinaya fursada dheer ee laguugu sugi lahaa inaad ku raaxeysatid galmo. Waxay qaadataa maalmo yar oo xooggan oo Cialis 4-5 si ay u bilawdo shaqo, sidaa daraadeed ha fileynin inaad ku noqotid macho dhab ah ka dib qaadashada kiniinka ugu horeeya. Si kastaba ha noqotee, qaybta wanaagsani waxay tahay inaadan marnaba dhibaato ku qabin mar kale sariirta - ilaa iyo inta aad qaadanayso maalin kasta si aad u qaadatid budada Cialis / tadalafil.
Sidee si sax ah u qaadataa budada tadalafil
Budada digaaga ee Tadalafil badanaa waxay ka timaadaa suuqyada noocyada kiniinada tadalafil; Markaad go'aansato inaad qaadato tadalafil, waa in aad adigu iska beddesho qiyaasta baahidaada.
Inta badan shakhsiyaadka, qiyaasta tallaalka ee lagu talinayo tadalafil waa maadada 10 maalin kasta, badanaa waxay qaadatay 30minutes ka hor inta aan la sameynin ficil galmo (tadalafil si loo isticmaalo). Iyadoo ay ku xiran tahay ku-filnaanshaha jawaab-celinta ama saameynaha, daawada waxaa loo kordhin karaa x mgka 20 ama waxaa lagu yareyn karaa XMUMX mg maalintii. Saamaynta tadalafil waxay socon kartaa ilaa saacadaha 5. Shakhsiyaadka qaadaya daawooyinka kor u qaada heerarka dhiigga ee tadalafil waa inaanay ka badnaan qiyaasta xaddiga 36 ee saacadaha 10 (Eeg isdhexgalka daroogada). Maalintiiba isticmaalka maalin kasta iyadoon loo eegin waxqabadka galmada qiyaasta la soo jeediyey waa 72 oo ah 2.5 mg maalin kasta. Tadalafil waa in aan la qaadin in ka badan hal mar maalintii.
Xusuusin Muhiim ah: Cialis waa in aan lagu qaadin Nitrate-ka awoodeeda sababtoo ah awooda hoos u dhigida cadaadiska dhiigga. Nitrate-yada looma qaadan karo ugu yaraan 48 saacadood kahor intaan Cialis la isticmaalin inta badan isticmaaleyaasha nitrate-ka ee u baahan inay ka fogaadaan tan iyo dhammaan PED5.
Tadalafil budada ah Codsiga iibka
Dukaanka maxaliga ah, ama isbitaalka, waxaan si fudud ku arki karnaa cialis, oo ah tadalafil. Haa, tani waa budada tadalafil - mid ka mid ah dalabyada ugu caansan ayaa loo sameeyaa daawo loogu talagalay daaweynta ED, badanaa waa qaab kiniinno ama kiniinno ah, marka lagu daro tan, dhab ahaantii, tadalafil ayaa sidoo kale loo adeegsaday munaasabado kale, sida :
Budada Tadalafil ee nacaanka galmada
Tadalafil waxaa lagu dari karaa nacnac si loo sameeyo nacnacyada caadiga ah si kor loogu qaado baahida galmada ragga. Waxaa jira noocyo aad u badan oo ah macmacaanka galmada ee Malaysia, waxyaabaha ugu muhiimsan badanaa waa budada tadalafil, iyo budada sildenafil.
Budada Tadalafil loogu talagalay qaxwaha
Suuqyada, waxaa jira noocyo kala duwan oo qaxwaha ah. Qodobka sida caadiga ah waa: Coconut Caano, Honey, Cinnamon, Cacao, Maca.Sex kafeega waa nooca dambe ee cabitaanka leh Aztec. Dareemku wax yar ayuu kudheeraa, laakiin macaan ayaa ku filan inuu rafcaan u siiyo cid kasta oo udgoonkiisa. Qaxwahaas galmeedku wuxuu leeyahay maaddooyinka si wax ku ool ah u kordhiya libido. Maca, Cacao, Cinnamon, Honey iyo Coconut Caano si wadajir ah ayey u caawiyaan kor u qaadida wax soo saarka hoormoonka, hagaajinta tayada sambabada, dib u dhigista cagaarshowga, sonkorta dhiigga oo hooseysa, wanaajiso stamina iyo hagaajinta jinsiga.
Anaga ahaan, mararka qaarkood si aan u yeelano saameyn xoogan ama saameyn daciif ah, waxaan ka sameysan karnaa kafeega galmada adoo ku daraya budada kor u qaadaysa budada tadalafil, sida ku cad baahida macmiilku u qabo inuu sameeyo kafeega saameyno kala duwan.
Sida loo iibsado budada Tadalafil; iibso budada Cialis laga bilaabo AASraw